5 Solutions nkwado ndabere na mpaghara gị iphone Photos.
iPhones dị ukwuu enyi karịsịa mgbe ọ na-abịa na-akpakọba faịlụ maka gị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ha iPhones na-echekwa music faịlụ, akwụkwọ, videos, na ọtụtụ ndị ọzọ jụụ stof. Ọ bụrụ na ị na ụdị onye hụrụ photos, mgbe ahụ ị ga concur na iPhones nwere ike ịbụ nnọọ mma na-ewere photos ma na-eburu gị albums emebibeghị. N'agbanyeghị nke àgwà nchekwa na onyeōzi gosipụta iPhones enye, ihe nwere ike gbanwee utoojoo mgbe ọ bụla ị hapụ ndị dị mkpa foto faịlụ. Ụfọdụ ezi ihe nlereanya nke foto otu nwere ike mgbe eche nke adịkwa bụ foto agbamakwụkwọ, ụbọchị ọmụmụ photos n'etiti ndị ọzọ. Ugbu a, na-ekwu bụ na ọ bụ mgbe niile amamihe na-ndabere gị photos na bee onwe gị siri ike na ahụmahụ ị na-ekwesịghị ịdị na-. Ka anya na ụfọdụ nnọọ oru oma ụzọ ndabere gị faịlụ.
1. Wondershare TunesGo Ochie
Wondershare TunesGo Ochie e mere ka ị na-akọrọ karịsịa faịlụ-multimedia ọdịnaya site PC ka ngwaọrụ na itughari, Photo transfer nwere ike nweta na ala-eji nke a cross n'elu ikpo okwu software. The software na-enye ohere Dọrọ na dobe foto transfer ebe n'ịhụ na foto ndokwa a mere nnọọ mfe a onye ọrụ. N'ezie, ị ga-enwe iji wụnye software ngwá ọrụ na kọmputa gị. The software dị maka ma Mac na Windows ọrụ. Download na wụnye software si bọtịnụ n'okpuru.
Ị ga-mkpa mbụ Jikọọ na ngwaọrụ gị na iji eriri USB mgbe ahụ ẹkedori arụnyere ngwa.
Pịa na nhọrọ Photos on hapụrụ sidebar gị homepage. Foto gị na albums ga-apụta na ị ga-mkpa họrọ ha na pịa on Export na ị na-atọrọ ka nyefee photos gị na kọmputa.
iCloud bụ ihe ọzọ na egwu ebe ndabere ndị photos n'ezie na unu akụ. Ígwé ojii na-enye gị 5GB ebe nchekwa ohere ma i nwere ike ịzụta ihe bụrụ na ị chọrọ. Iji kwado foto gị na iCloud, ị ga-emekwa ka unu na-Apple ID. Ị nwere ike bulite ruo 1000 foto iCloud ma mgbe nile na-n'uche na mgbe ọ bụla ị gafee a akara, foto gị ga-akpaghị aka na-ehichapụ na-eji dochie na ndị ọhụrụ ị bulite. Mgbe na-eke ihe ID, na-aga Setting na pịa iCloud sochiri a click on Photos. Kwado bọtịnụ na-esote iCloud Photo Library na-akpaghị aka bulite gị foto iCloud.
Otu ndị ọzọ oké usoro iji ndabere gị photos bụ iji iTunes. Itunes bụ ewu ewu n'etiti ndị ọrụ si apụl obodo ma ọ na-eji nwayọọ nwayọọ-akpụ akpụ na Windows ụwa dị ka mma. Na iTunes i nwere ike mmekọrịta gị iPhone ka PC. Dị nnọọ jikọọ gị iPhone ka PC na iji eriri USB mgbe ahụ ẹkedori gị iTunes ngwa. The nzọụkwụ ọzọ bụ ịchọta gị ngwaọrụ site na interface ma chọta photos ka mmekọrịta na ha na Ntọala taabụ. Pịa na mmekọrịta button na ala n'akụkụ aka nri nke interface na imecha syncing foto gị.
4. iPhoto maka Mac
iPhoto bụ a software na-agba ọsọ na Mac n'elu ikpo okwu na dị mma ruru eru maka importing na-edezi foto site na iPhones na ọtụtụ ndị ọzọ dijitalụ ngwaọrụ. Otu oké akụkụ na iPhoto bụ na ọ na-achọpụta rụọ kasị ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla ọzọ ọkwọ ụgbọala nwụnye. Iji nke a ịtụnanya mac ngwá ọrụ, ị ga-enwe iji wụnye ya mbụ ịlele ngwa ahịa n'ihi na. Ị kwesịrị ị na mgbe ahụ ẹkedori na jikọọ na gị iPhone na iji eriri USB. Ị ga-ahụ gị na ngwaọrụ na ekpe panel nke iPhoto si interface. Pịa na Ikpeazụ Import na họrọ gị niile foto. Press Dezie mgbe ahụ Detuo mgbe ahụ gaa Finder na pịa on Dezie mgbe ahụ mado XX ihe ka Tapawa foto gị Mac.
5. PhotoTransferApp maka Windows
Ọ bụrụ na ị bụ onye na windows ọrụ na onye na-ịchọrọ ị nyefee gị foto gị PC site na iPhone, mgbe ahụ, nke a bụ ngwa n'ihi na gị. Ngwa na deigned na-ekwe ka ngwa nkwurịta okwu site na PC na-iPhone. Ị ga-mkpa wụnye ngwa na gị iPhone na PC n'ihi na nke a na-arụ ọrụ. Ị nwere ike nweta ma ngwa site http://www.phototransferapp.com. Mgbe echichi, jikọọ ngwaọrụ abụọ ka otu Wi-Fi netwọk mgbe ahụ na-amalite na-eji ngwa gị iPhone mbụ. Ẹkedori gị na phototransferapp na windo.
Ọ bụrụ na ndị njikọ bụ dịkwa mma ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ gị iPhone si PC.
Pịa na ngwaọrụ gị na ikike njikọ na pịa na ngwaọrụ gị ọzọ maka foto gị na-egosi na interface.
Họrọ photos na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara gị windows PC mgbe ahụ ngwa mmanya na anya n'ihi na otu nhọrọ aha ya bụ Download Images. Pịa na a button ibudata ndị oyiyi gị PC.
> Resource> iPhone> 5 Solutions nkwado ndabere na mpaghara gị iphone Photos